फोटोको पावर « Khasokhas KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS CoronaVirus Fact Checking CoronaVirus News Update CoronaVirus: Stories of Hope CoronaVirus Resource Center File UI or PUA Claim Donate to Khasokhas
जब काठमाडौंमा यस्तो जुलुस निस्कियो (फोटो फिचर )
पशु बली बन्द गर्न माग गर्दै विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण र्‍याली निकालिएको छ। सहभागीहरुले रत्नपार्कमा भेला भएर धर्मको नाममा हुने पशु बली अन्त्यको माग गरेका थिए। उक्त र्‍यालीमा
‘गुठी विद्येयक २०७५ खारेज गर !’ (फोटो फिचर )
– दीपेन्द्र ढुंगाना सरकारले ल्याउन लागेको गुठी विद्येयकको विरोधमा राजधानीमा बुधबार प्रदर्शन गरिएको छ । राजधानीको बसन्तपुर न्यूरोड लगायतका क्षेत्रमा गुठी विद्येयक २०७५ खारेज गर भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको हो
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोई ? (फोटो फिचर )
– दीपेन्द्र ढुंगाना मिम नेपाल युट्युब च्यानलका प्रस्तोता प्रनेश गौतमको पक्षमा बुधबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ।गौतमलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कारबाही अघि बढाइएपछि उनका समर्थकले माइतीघरमा
गुठी विधेयक विरोधी प्रदर्शन तस्वीरमा
गुठी विधेयक विरोधी प्रदर्शनका केही दृश्यहरु, जसलाई खसोखासका लागि दीपेन्द्र ढुंगानाले तस्वीरमा कैद गरेका हुन् ।
महत्वकांक्षी ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को सुरुवात (फोटो फिचर )
सरकारले महत्वकांक्षी कार्यक्रम ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को सुरुवात गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित एक समोरोहबाट कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका हुन् । समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
अल्लाहलाई धन्यवाद !
– दिपेन्द्र ढुंगाना चन्द्रमाको सौन्दर्य र आकारमा आधारित इद उल फितरको अनुग्रह प्रकृतिको हातमा रहेको मानिन्छ । त्यसैले रमजानको अन्तिम दिन साँझमा सबैजनाले चन्द्रमा हेर्ने गर्छन् । अर्धचन्द्र अर्थात् हिजाल
न्यूयोर्कमा “साकेला उभौली” २०१९ -तस्वीरमा !!
अमेरिकाको कोलोराडोमा पारिवारिक कार्यक्रममा भाग लिन जाने क्रममा मंगलबार पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको न्युयोर्कमा ट्रान्जिट परेको थियो । लामो ट्रान्जिट भएका कारण उहाँले त्यो समय समर्थक, शुभचिन्तकसँगको भेटघाट र घुमघाममा
चेरीले ढकमक्क वासिंटन डिसी (फोटो फिचर )
यतिबेला अमेरिकाको राजधानी वासिंटन डिसी चेरी फूलेर ढकमक्क भएको छ । अमेरिकाको न्युयोर्क, न्युजर्सी लगायतका राज्यमा पनि चेरी फूलिसकेको छ । तर वासिंटन डिसीको चेरीलाई विशेष रुपमा लिइन्छ ।
वासिंटन डिसीमा रहेको नेपाली दूतावासमा प्रचण्डको स्वागत (फोटो फिचर )
वासिंटन डिसीमा रहेको नेपाली दूतावासमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वागत गरिएको छ । फोटो : गंगा दाहाल